Yiba namava eSuncadia 2 Bed, 2.5 Bath +Loft Townhome
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguKatie
Eli khaya linobubele, libanzi kwaye lipholile lilala esi-8 elinamagumbi amabini amakhulu okulala, kubandakanya ne-master suite enegumbi lokuhlambela labucala, kunye negumbi lokulala elingaphezulu kunye nebhafu eyi-2.5 entliziyweni yeSuncadia ebekwe kwiiNtaba zeCascade. Ikhaya eligqibeleleyo lesibini esijonge ukuchitha impelaveki kude sisonwabele uxolo kunye nokuzola kweentaba ukuya kwiintsapho ezinkulu ezijonga indawo yolonwabo yangaphandle egcweleyo. Iindwendwe azikwazi ukufikelela kwi-pool okanye iziko lokufaneleka ngenxa yemigaqo-nkqubo ye-Suncadia Resorts malunga nobulungu.
Inqanaba eliphambili libambe uyilo oluvulekileyo lwekhitshi kwigumbi lokuhlala kunye nokufikelela kwipatio kwi-bbq. Umgangatho ophambili ukwabandakanya igumbi lomgubo, igumbi lokulala elikhulu elinebhedi yobukhulu bokumkanikazi, ibhafu enkulu kunye nokufikelela kwigaraji yemoto enye. Ibhedi iguquka ibe yibhedi yokumkanikazi.
Umgangatho wesibini unegumbi lokulala eli-1 kunye neloft enkulu. Igumbi lokulala linebhedi enkulukazi kunye neloft inesofa eguqukayo ibe yibhedi yokumkanikazi. Igumbi lokulala kunye negumbi eliphezulu labelana ngegumbi lokuhlambela eligcweleyo. Umgangatho wesibini unegumbi elikhulu lokuhlamba impahla kunye newasha / isomisi esipheleleyo.
4.91 · Izimvo eziyi-68
Zininzi iindawo zomthambo wangaphandle wokutyibilika ekhephini, ukutyibilika ekhephini, ukubaleka, ukuhamba, ukukhwela ibhayisekile intaba, amachibi akufuphi ukuze uphakame, ukhwele inqanawa, i-kayaking kunye neNgqungquthela e-Snoqualmie Nordic kunye ne-Downhill Ski kunye noLonwabo zonke zibekwe entliziyweni yeeNtaba zeCascade. !
Ifumaneka ngeselfowuni ngalo lonke ixesha. 30-60 imizuzu avareji ixesha lokuphendula.